डब्लुएचओले दियो संसारलाई त्रसित गराउने खबर ! अब बन्द गर्नै पर्छ? – Paluwa Khabar
साउन १५, २०७८ शुक्रबार 85
विश्वभरी भाइरसबाट सङ्क्रमितको साप्ताहिक सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। यही जुलाई १७ देखि २५ सम्मको सात दिनमा त्यसको अघिल्लो हप्ताको तुलनामा ८ प्रतिशत बृद्धि भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
त्यस हप्ता ३८ लाख मानिस भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य सम्वन्धी निकायको रुपमा रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कतिपय क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको जनाएको छ। पछिल्लो हप्ता दैनिक विश्वभरी पाँच लाख ४० हजार सङ्क्रमित भएका छन्।
दुई बच्चाबीचको अन्तर कति ?
आधुनिक समाज आफुले जति स्याहार्न सकिन्छ त्यत्तीनै बच्चा जन्माउने योजना गर्न थालेका छन् । एक भन्दा बढी बच्चा जन्माउने हो भने गर्भको अन्तर कति राख्ने भन्न विषयमा उनीहरुमा सोँच आउन थालेको छ ।
यो पुरै अभिभावकमा निर्भर हुने गर्छ । यदी तपाई र तपाईको जीवन साथीको उमेर कम छ भने तपाई आफ्नो परिवारलाई छिट्टै बढाउन चाहनु हुन्छ । अध्ययन मुताविक दुई गर्भबीचको अन्तर १८ महिना राख्नु राम्रो हो । पहिलो बच्चा यदी शल्यक्रियाबाट भएको छ भने दोस्रो बच्चाको योजनाले आमाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
बच्चा जन्माउने समयमा अप्ठेरो हुने बाहेक गर्भको समयमा अन्य समस्या पनि आउन सक्छ । चिकित्सकले पनि दुई बच्चाबीचको अन्तर आमाबुवाको उमेरका अलावा उनीहरुको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा निर्भर राख्नु राम्रो मानेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार पहिलो बच्चा ६ वर्षको भएपछि राम्रो हुने छ ।
Nextट्राफिक प्रहरी र पूर्वयुवराज पारस शाहबीच हात हालाहाल (भिडिओ)
रेखा थापाको बिहेको मिती तो’ कियो , यी केटासँग गा’ स्दै छिन् ल’ गनगाँठो
गगन थापा माथी लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ?